Izikhangibavakashi eSopot, Poland: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Uma sikhuluma izinkambo ePoland ke amaRashiya ukhetha Warsaw noma Krakow, nakuba kukhona edolobheni resort esisogwini olusentshonalanga ye Baltic Sea, okuyinto uthando kubalandeli angaphandle lolwandle nokungcebeleka.
Igama lalesi emzaneni enhle ijwayelekile eziningi kusukela nenkathi yamaSoviet, lapho imikhosi yayithandwa izingoma ze-pop. ESopot - nendawo enkulu ukuze iholide ePoland, uyawuthanda idumela elihle kakhulu. Ngenxa yobuningi emabhishi, imisebenzi amanzi, ngezizathu embukisweni edolobheni kubhekwa inhlokodolobha ehlobo yezwe.
Ukwelapha ambiwa phansi
Ngokuthakazelisayo, zokugeza lokuqala zokwelapha babe phakathi sibonga XIX leminyaka yemizamo udokotela yangaphambili Napoleon-Jan Haffner. Udokotela, ujabula ukwakhiwa yenzalo yabo yezitolo ukuhamba, ngaphambilini ukwakha lonke eziyinkimbinkimbi abantu nge ocacile lokuzihlambulula izindawo. Cabs kwabesilisa nabesifazane abangu eline izibuko ezinkulu namabhentshi ukhululekile.
Manje kanye emabhishi amahle welula ebabazekayo North Park, futhi eduze zokugeza ngaphandle kokuvinjelwa emikhulu ebusweni bomhlaba kuyimiphumela ezihlukahlukene izitolo kanye nightlife. Ukwelapha ingcebo amaminerali, ecebile i-iodine, futhi ithuthukiswe ingqalasizinda izivakashi wenzile umuzi kakhulu ezikhangayo izivakashi.
Izikhangibavakashi eSopot (Poland) zihlukene kangaka futhi ezithakazelisayo ukuthi ungakwazi ukukhuluma ngabo isikhathi eside. Ake ukugxila olungavamile kunazo zonke kubo, okungase ngokuthi amakhadi resort ibhizinisi.
indawo Izintandokazi zezivakashi eza ukuphumula - pier Ngokhuni, ngokuphindiwe sezithotshiselwe phansi sokubuyiselwa. Naye iqala ujwayele idolobha emangalisayo, ofakwe esimweni ekhethekile. Ngo-1817, amasosha Russian yamisa wokwakha imikhumbi yabo futhi ahamba, walibhubhisa. Futhi kuphela ngemiyalo yezikhulu Dr. Haffner waqala ukwakhiwa pier zokungcebeleka izivakashi.
Road mayelana 500 amamitha uzibuthe eside lidonsa abantu bazo zonke romantics besemaphusheni futhi abathandi. Lona ube indawo ethokozisayo lapho ungakwazi ngiphefumula umoya usawoti kanye njengokungathi sijabulela indawo enhle emangalisa nokuthola inzuzo elingenakuphikwa ukuhamba. iodine eningi emoyeni kunomthelela ngcono umzimba. Labo abafisa ukuhamba phezu ibhuloho lezingodo njalo kuvame, futhi ngisho bendawo ukhethe ekhoneni ethokomele ukuze saziso kusihlwa ukuvakasha.
ekhoneni ethokomele nge ukuzijabulisa ukuze ivumelane zonke ukunambitheka
Izikhangibavakashi eSopot (Poland), yakhiwa kwebhuloho kanye Spa square, okuyinto ngokuvamile iphatha amakhonsathi. Izivakashi uthande pier lokhuni futhi ngenxa yokuthi kukhona enhle isikhumbuzo izitolo lapho ungakwazi ukuthenga nanoma yini nje, kodwa zokudlela olunothile nezindawo zokudlela ezinhle ngemva uhambo olude, ungakwazi ukudla lendawo.
Imodi ezithakazelisa kakhulu kwezokuthutha izivakashi kuyoba itekisi amanzi, futhi kungenzeka ukwenza Baltic Sea uhambo oluthakazelisayo esikebheni izivakashi, okuyoba izinkumbulo amahle kakhulu. Izivakashi umuzi kumnandi ukuthatha izithombe kwi-Memory of lighthouse ulwandle futhi umthombo.
Kuyathakazelisa ukuthi muva nje waziwa emhlabeni wonke ezikhangayo elingavamile eSopot. Yini ukubona emzini Yiqiniso, izivakashi ukuzinqumela ngokwabo, kodwa akekho izivakashi resort akusho yithuba bajwayelane ikhaya esiyingqayizivele, lithole udumo omkhulu.
Ngo-2004, abaklami ezimbili Polish ngizile nedizayini ongaziwa yezakhiwo, elingenalo imigca lecondzile nama-engeli. Ayikho izivakashi sihamba Krivoy ekhaya, hhayi ifotho kuye. imiklamo Umnikazi ngiphuphe ukuthi ukuyothenga wakhe isikhungo bekulokhu ekulalelweni, nochwepheshe baye basiza kuye kule.
ezikhangayo ewubuciko e eSopot (Poland) nendawo ethize amamitha sibonga engaphezu kwezinkulungwane ezine ngethalenta abalobi ezihambisana ngokuvumelana ezihlangene ku engxenyeni mlando resort. iphrojekthi Commercial edonsela eziningi izivakashi, okuyinto ejabulisa inkosi yayo kuphela.
ingilazi netshe ukwakhiwa libhekene asymmetry, futhi ugobile yayo sifana nesakhiwo fabulous. Uphahla yakhelwe ngesimo ifaka oluhlaza, okusikhumbuza dragon izikali, ebukeka ethakazelisa kakhulu. Ijika endlini elise ngaphakathi nosaziwayo futhi ubhiya ezinkantini usebenza ubusuku nemini, ukuze ngisho ebusuku ungakwazi ukuza zibabaza isakhiwo kusukela ngaphandle nangaphakathi.
Kodwa hhayi kuphela imithombo yamanzi amtoti nezakhiwo engavamile emhlabeni wonke ngoba eSopot ebukekayo (Poland).
Imisebenzi: amabhishi, amahhotela
Kutholwe ogwini Bay of Gdansk edolobheni elidumile emabhishi ayo futhi ulwandle mnene, futhi akumangalisi ukuthi lidumile abathandi yokuchitha isizungu ezolile. Izivakashi bathi ingqalasizinda wadala for Imikhaya enezingane ezisencane. Shono amabhishi Baltic ezibhekwa okungcono nephephile eYurophu ngenxa ngokuhlanzeka uqaphe ngokucophelela idolobha solar eSopot (Poland).
ESopot ezikhangayo - amabhishi acwebile, okuyinto yokwelula ngezinyawo amakhilomitha amane. Lezi zinsumpa ngokusebenzisa ezihlukahlukene tournaments volleyball, ibhola kanye neminye imisebenzi, futhi kulabo abafuna ukufunda ukuvula ekhethekile ezikoleni Aquatics.
Pearl of the Polish Baltic Sea enakekela izivakashi zayo futhi inikeza indawo yokuhlala ntofontofo. ESopot ubhekwa kufinyeleleke eziningi izivakashi edolobheni - izindleko abahlala amahhotela ngesikhathi ibambene isizini izivakashi lingaphansi kakhulu kunakwezinye izindawo zokungcebeleka.
Kulabo zijwayele sokunethezeka, Orbis Grand 3 * iyindawo ephelele. Ibhizinisi ikhadi komuzi, elise emnyango pier, is yamjabulisa ukusingatha izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Kulabo azisetshenziswa nokucabanga banknotes, sihlinzeke izinhlelo zabo Ihhotela Ohlala, Haffner 4 *, Opera, elise enkabeni yedolobha futhi Awukude olunesihlabathi.
Elikhulu izinkampani abafundi ungakwazi pre-ukubhuka ehostela lwendawo amakamelo ethokomele noma iholide ekhaya Rzemieslnik, okuyinto zitholakala ezindaweni eziluhlaza.
Izikhangibavakashi eSopot: kuphi ukuya?
City zinothile ezindaweni ezithakazelisayo, lapho izivakashi uya weza ngokushesha. Ukuze zonke shopaholics kuyoba yinto emnandi Monciak, okuyinto inama boutiques engcono kuyoba abantu yokudala uyajabula eziningi zobuciko.
Ukunqanda Wharf izivakashi Umdobi sika begijima izinhlanzi fresh ngibhema, ezidayiswa yi-bendawo. Kukhona indlwana ukwazi umKristu iminyaka ihlangabezana bendawo, uyasuka nezikebhe catch yabo.
Abathandi umculo umsindo kakhulu ngeke udumazeke ngemva kokuya inkundla yemidlalo yaseshashalazini "Ihlathi Opera". Yakhelwe engaphezu kweyikhulu edlule, ukukhangana yangempela lufrenyiwe ihlathi, futhi wonke umuntu owafika ekhonsathini, umoya ohlanzekile.
Mhlawumbe, siye ohlwini ezikhangayo esemqoka eSopot (Poland) - Beautiful resort, Underrated yizivakashi. Idolobhana ayinakho izikhumbuzo lasendulo, kodwa kunezinye izindawo eziningi ukuthi uzokwenza yokuhlala nokushiya emnandi. Ezivakashela le eSopot ebukekayo, ungazisoli nohambo lwabo.
Amatende Maverick - imfudumalo nenduduzo ithanga bemvelo!
Yini ukuletha kusuka eCuba njengoba isikhumbuzo?
Indlela ngiye eJalimane yokuhlala unomphela?
Lwemali Cyprus, ikakhulukazi esiqhingini nemithetho
Imiyalelo: indlela wokhela umentshisi ngaphandle ibhokisi
Ngifuna abakhulelwayo, kodwa akunakwenzeka. Yini okumelwe uyenze?
Ngokubhala Business ngesiNgisi
Netbook Asus Eee PC 900: Ukucaciswa, ukubuyekezwa
Ukunakwa, ama-moles ezweni! Ingxenye Yesibili: Ukubamba kanjani imvukuzane ngokwakho
Mat Groening - a cartoonist ekhaliphile nomdlali abanamakhono!
Glue, sikelo, iphepha - I-Quilling nokubaleka ka fancy!
Umlingisi House, eYekaterinburg: ikheli, isithombe, ukubuyekezwa
"Digger" - kunjani lokho?
Indlela yokubukeka yokwandisa isifuba ngezingubo?
Uyini viscosity amafutha injini, futhi kuthinta kanjani ekusebenzeni injini
Eagle City: labantu, incazelo, ezikhangayo
Wen engalweni, ukwelashwa